ထုတ်လွှင့်အိန္ဒိယပြရန် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အဖြစ်အပျက် » ထုတ်လွှင့်အိန္ဒိယပြရန်
« NAB ပြရန်
နည်းပညာလျှပ်စီးမြန်နှုန်းမှာတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနှင့်အဲဒါကိုထိသိသိသာသာသက်ရောက်မှုအရာရာ; ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလောကီသားတို့သည်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဆန်းသစ်တိုးတစ်ခုလုံးကိုအစအဆုံးအကုန်တဦးတည်းထူးခြားတဲ့အခါသမယ မှလွဲ. အချိန်တွေ့ရခဲသောအများဆုံးဖြစ်နေဆဲပင်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, 27 နှစ်အတွင်းအဘို့, အသံလွှင့်အိန္ဒိယ Show ကိုတဦးတည်းလက်အပေါ်ကိုရည်ညွှန်းပြသသောအပြန်အလှန်ပလက်ဖောင်းဖြစ်လာသည်ပါရာဒိုင်းကမ္ဘာအနှံ့ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာပြောင်းရွှေ့ရသည်။ အခြားတွင်ပြုလုပ်သင်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်အံ့ဘှယျဦးပထမဦးဆုံးလက်တွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ အိန္ဒိယမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုကဏ္ဍ တိုင်းပြည်အတွင်းအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် 11 အတွက်စုစုပေါင်းဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 20 ဘီလီယံ 2016% ကြီးပြင်း; ကအစီရင်ခံစာအရသိရသည် FICCI။ ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် 35 အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံကိုမထိရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်, ဖြန့်ဖြူး, ရုပ်ရှင်, ပုံနှိပ်, ရေဒီယို, ကြော်ငြာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုးတက်မှုနှုန်းမောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများတချို့ရှိနေပါတယ်။
အဆိုပါအသံလွှင့်အိန္ဒိယပြရန် 2018 နှင့်အတူကမျိုးဆက်သစ်အသံလွှင့်နည်းပညာများအတွက်လမ်းလုပ်ဖို့အချိန် - ပိုမြန်, ထုတ်လွှင့်အတူလုပ်ကိုင်, ရုပ်ရှင်, အသံ, ရေဒီယိုနှင့်အခြားအရာအားလုံး၏ပိုမိုလွယ်ကူပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းနှင့်ကျိန်းသေပိုပြီးဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကိုယင်းဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ပြုလုပ် - က၎င်း၏အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကနေသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဝေရန်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားကနေကုမ္ပဏီများနှင့် Corporation, စစ်ပြန်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, ပေးသွင်းသူများနှင့်ဖောက်သည်များ, အမြော်အမြင်နှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများ, အခွင့်အလမ်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကိုစုသိမ်းကုန်သွယ်ရေးဆက်သွယ်မှုထူထောင်ရန်နှင့်စံနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့အကြီးမားဆုံးစကေးအပေါ် pooling အရင်းအမြစ်လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအသံလွှင့်အိန္ဒိယပြရန်၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေကျော်ကိုမြင်လျှင် 9,862 ထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များ နှင့်ကျော် 500 အမှတ်တံဆိပ် ထက် ပို. အနေဖြင့်သင်တန်းသားများ 36 နိုင်ငံများ အတူတကွပိုမိုမြန်ဆန်တခြားသူတွေထက်ရှေ့သို့တိုးတက်မှုကွေး၏တွန်းအားပေးရန်စိတ်အားထက်သန်လာမယ့်။ တစ်ဦးဧည့်သည်သို့မဟုတ်တစ်ပါဝင်သူသကဲ့သို့, ပြပွဲသင်တို့အဘို့အသစ်ကိုဖျော်ဖြေရေးမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း chart ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။
မဟာရပ်ရှ, မွမ်ဘိုင်း 400063 အိႏၵိယ + Google ကမြေပုံ
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မေလ 2019 (233) ဧပြီလ 2019 (503) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)